Awards - vivo VISION+
vivo VISION + Mobile Photography Awards သည် vivo VISION + ပဏာမခြေလှမ်း၏ အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
vivo နှင့် National Geographic တို့ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲအဖြစ် vivo VISION + Mobile Photography Awards သည် Steve McCurry နှင့် Michael Halsband အပါအဝင် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဓာတ်ပုံဆရာများအား အလုပ်အားလုံးကို အကဲဖြတ်ရန် ဖိတ်ကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။ "JOY IMAGE" သည် အဓိကစိတ်သဘောထားအနေဖြင့် အမှတ်ရစရာအချိန်များကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး မိမိတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ဖန်တီးသူများကို အမျိုးအစားများများစွာကို စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
Head of Branded Content and Partnership, National Geographic（China）
၁။ vivo VISION+ Mobile Photography Awards ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လဲ?
၎င်းတို့နေထိုင်ရာနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသရှိ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ နိုင်ငံသားရေးရာအပြည့်အဝရှိသည့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ။ အခြားဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိခဲ့သည့် (သို့မဟုတ်) အများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဂျာနယ်များတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် အလုပ်များကို Awards တွင် လက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
၂။ ပြိုင်ပွဲတွင် မည်သို့ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်နည်း?
သင်၏လက်ရာများကို vivo VISION + Mobile Photography Awards ၏ http://visionplus.vivo.com တွင် တရားဝင် တင်ပြနိုင်သည်။ အီးမေးလ်မှတဆင့် တင်ပြချက်ကို လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏လက်ရာများကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ် မှတစ်ဆင့် တင်ပြသည့်အခါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကောင့်ဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ရန်နှင့် သင်၏လက်ရာများကို တင်ပို့ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စီမံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အကောင့်ကို သင်၏တစ်ခုတည်းသောအထောက်အထားအဖြစ် ဆုပေးသူအား အသုံးပြုခွင့် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အရ ဆုပေးသူသည် သင်၏အကောင့် ID၊ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် သင်၏ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံများကို စုဆောင်းလိမ့်မည်။ သင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သင်၏ logging လုပ်ခြင်းသည် Vivo VISION + Mobile Photography Awards ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်“ အသုံးပြုသူဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက်” နှင့်“ သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ” ကို သင် သဘောတူသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပြီး vivo Vision + Mobile Photography Awards ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အသိပေးအကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။
၃။ ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို vivo စမတ်ဖုန်းများနှင့်သာ ရိုက်ရမှာလား။
Vivo VISION + Mobile Photography Awards တွင် ဖန်တီးမှုလက်ရာအားလုံးကို စမတ်ဖုန်းများဖြင့် ရိုက်ကူးရမည်။ သို့သော် ဓာတ်ပုံအချိန်နှင့် စမတ်ဖုန်းပုံစံနှင့် ပုံစံကို အကန့်အသတ်မရှိဘဲ (iQOO အပါအဝင်) vivo စမတ်ဖုန်းများကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။
၄။ ဘယ်အချိန်ထိ နောက်ဆုံးထား ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လဲ။
VISION + Mobile Photography Awards ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်းအတွက် စတင်မည့်အချိန်ကို အသိပေးအကြောင်းကြားပါမည်။ ပါဝင်တင်သွင်းရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သည် ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်၊ ၂၄:၂၀ ပေကျင်းပီကင်းအချိန် (UTC + 8) ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ပြီးနောက် ဆုပေးပွဲ၏မျှတမှုအတွက် သင်၏လက်ရာများကို ဖယ်ရှာခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အတွက် လမ်းညွှန်အပိုဒ် ၁၈ ကိုကြည့်ပါ။
၅။ ပြိုင်ပွဲဝင် လက်ရာများအတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများသည် စမတ်ဖုန်းများဖြင့်သာ ဖန်တီးထားမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည် (စမတ်ဖုန်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော တတိယပါတီဆော့ဖ်ဝဲကို လက်ခံနိုင်သည်) JPG ပုံစံကိုသာခွင့်ပြုထားသည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ခုစီသည် ၁၀၀၀ pixel ထက်မကျော်ရဘဲ၂၀ megabytes ထက်မပိုရပါ။ လက်ခံရန်လိုသော ဗီဒီယိုကလစ်များသည် ကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပ်များကို အသုံးပြု၍ တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သို့သော် စမတ်ဖုန်းများနှင့်ရိုက်ကူးထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စီသည် ၅၀၀ မဂ္ဂါဘိုက်ထက် မကျော်လွန်ရသလို mp4 နှင့် mov formats များကိုသာ လက်ခံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၆။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရာများအတွက် အကန့်အသတ်ရှိပါသလား။
အခြေခံအားဖြင့် အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ ၉ ခုထက်မပိုတဲ့ ဓာတ်ပုံအစုတစ်ခု (သို့) ၃ မိနစ်ထက်မပိုသော ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု စသည်တို့ကို (entry-item) တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ရေတွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၇။ ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို တင်သွင်းလို့မရပါက ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာ တင်သွင်းခြင်းအခက်အခဲရှိပါက visionplus@vivo.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
၈။ ကျွနု်ပ်၏လက်ရာသည် ဘယ်အမျိုးအစားတွင် အကျုံးဝင်လဲဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။
သင့်လက်ရာနှင့် အလိုက်ဖက်ဆုံး အမျိုးအစားကို စာရင်းမသွင်းခင်နှင့် တင်သွင်းခြင်းမတိုင်ခင် အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ ဆိုလိုရင်းများကို သိရှိနားလည်ထားစေလိုပါသည်။
Night: ညသည် နေ့၏အခြားဘက်ခြမ်း - အနုပညာသဘာအရ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိသည်။ အမှောင်ထုအောက်တွင် ဖုံးကွယ်မိနေသော ပုံရိပ်များနှင့် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာများကို ဖော်ထုတ်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
Landscape။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က (သို့မဟုတ်) ခရီးသွားစဉ်က တွေ့ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ လှပတဲ့ သဘာဝတရားကြီးကို ပြသလိုက်ပါ။ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာတွေ သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့ အဲ့ဒီ့အရာတွေကို ကျွနု်ုပ်တို့နှင့်အတူ မျှဝေလိုက်ရအောင်။
Motion: လှုပ်ရှားမှုတွေကို ငြင်းဆန်ပြီး မြန်နှုန်းကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ လူတစ်ယောက်သည် အကောင်းမွန်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရှာဖွေနေသည့် ခပ်ရဲရဲ အခိုက်အတန့်ကို ချုံ့ချဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။
Portrait - ကမ္ဘာကြီးဟာ kaleidoscope တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းက အပိုင်းအစ တစ်ခုလိုပါပဲ။ သင့်ကမ္ဘာကို အလင်းဖြာသွားစေသော မျက်နှာများကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးလိုက်ပါ။
Memories - လူ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ပြရန် (ကိုးခုထက် မပိုသော) ဓာတ်ပုံအစုတစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။ သင့်နှလုံးသားကို ထိမိသွားခဲ့သော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အကြောင်း ပြောပြပါ။
Story - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် မည်သည့်ခေါင်းစဉ်တွင်မဆို ဗီဒီယိုတိုတစ်ခု (၃ မိနစ်ထက်မပို)ကို ဖန်တီးပါ။
၉။ ကျွနု်ပ်၏ ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင် ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးအောက်မှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်ဆုအမျိုးအစား တစ်ခုထက်မကပါက ထိုဖန်တီးမှုလက်ရာကို ကွဲပြားခြားနားသော entry အမျိုးအစားများအဖြစ် တွက်မှတ်သွာပါမည်။ ဆုများ၏တရားမျှတမှုအတွက် သင့်အနေဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများအား စကာတင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် သင်၏လက်ရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အတွက် လမ်းညွှန်အခန်း ၁၇ ကိုကြည့်ပါ။"
၁၀။ ဖန်တီးလက်ရာများအပြင် အခြားမည်သည့် အချက်အလက်များ တင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသလဲ။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းခြင်းသည် သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်၊ သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့် သင်၏ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံ၊ လိင်အမျိုးအစား၊ နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဒေသ၊ ပရိုဖိုင်း၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အသက် အပါအဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သင်ဖြည့်စွက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ဖြစ်သည်။ သင် တင်သွင်းထားသော ဖန်တီးမှုလက်ရာများနှင့် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောအကျဉ်းချုပ်များကိုလည်း တင်ပြရပါမည်။ သတင်းအချက်အလက်များထဲမှ အသုံးပြုသူအကောင့်စုဆောင်းခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ်သည် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက် သင့်အား ချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် ကျားမရေးရာနှင့် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကို စုဆောင်းခြင်းသည် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားအတွက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံ၊ ပရိုဖိုင်း၊ နိုင်ငံ(သို့မဟုတ်)မြို့ကိုစုဆောင်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ သင်၏အလုပ်များနှင့်အတူ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ပြသနိုင်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။
Awards ၌ ပါဝင်နေစဉ် သင်၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကို အာမခံရန်အတွက် သင်ဖြည့်စွက်ပေးသော (သို့မဟုတ်) ဖြည့်စွက်သည့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်သည် တိကျသေချာမှု ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ မပြည့်စုံသော (သို့မဟုတ်) မတိကျသော မည်သည့်အရာမဆိုက သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများ၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နှင့် သင်၏လက်ရာများကို အကဲဖြတ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ချီးမြှင့်ခြင်းတင်ပြခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သွားစေနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ပြိုင်ပွဲအတွက် ကျွနု်ပ်၏ ဖန်တီးမှု ဘယ်လို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။
Personal Center ရှိ "Gallery" စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင်တင်ပို့လိုက်သော ဖန်တီးမှုလက်ရာများ၏ အခြေအနေကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၁၂။ ပေးပို့တင်သွင်းထားသော ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိပါလို့ ဘာလို့ပြနေတာပါလဲ။
"လျှောက်ထားသူများသည် သူ(သို့မဟုတ်)သူမနေထိုင်သော နိုင်ငံ၊ ဒေသရှိ သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လိုက်နာရမည့် ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်ကတိပြုရမည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝါဒ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ နိုင်ငံတော်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သော မည့်သည့်ဖန်တီးမှုလက်ရာများကိုမဆို ပေးပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ကမကထပြုသူက အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်သောအလုပ်များနှင့် လူမှုကျင့်ဝတ်များကို ဆုချီးမြှင့်မှုအတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ ချီးမြှင့်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ အပိုဒ် (၈) ကိုချိုးဖောက်သောအကျင့်များကိုလည်း ပြိုင်ပွဲအတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မှီသူဟု သတ်မှတ်ပြီး မထောက်ခံကြောင်းအမှတ်အသားပြု ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁၃။ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနည်းလမ်းက ဘယ်လိုပါလဲ။
ပေးပို့တင်သွင်းထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်း၏ ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို Awards ရှိ ဝန်ထမ်းများက စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးသည်နှင့် စိစစ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ပြိုင်ပွဲ၏စည်းကမ်းချက်များကို ကြည့်ပါ)။ ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို သတ်မှတ်ရက်နောက်ဆုံးအပြီး ပေးပို့တင်သွင်းပြီးနောက် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့မှ နောက်ဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုမီ စည်းရုံးရေးကော်မတီနှင့် ပဏာမတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့သည် ရွေးချယ်ထားသောလက်ရာများကို နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော အကောင်းဆုံးလက်ရာများကို ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မည်သည့်လက်ရာတစ်ခုခုကဖြစ်စေ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုချိုးဖောက်ပါက (သို့မဟုတ်) မည်သည့်အသုံးပြုသူကဖြစ်စေ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းမှ ထွက်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် Awards အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မှီတော့မည် မဟုတ်ပါ။
၁၄။ ဆုတွေက ဘာတွေလဲ။
The vivo VISION+ PRIZE of USD15,000
Vivo Smart Phone x1
အနိုင်ရရှိသူများကို National Geographic မဂ္ဂဇင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံပြပွဲများ၌ ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
The vivo VISION+ PRIZE of USD5, 000
The vivo VISION+ PRIZE of USD1, 000
* ဆုများအားလုံးသည် အခွန်ကြေး မပါဝင်ပါ။
* ချီးမြှင့်လက်မှတ်များကို vivo VISION + နှင့် National Geographic တို့မှ ပူးတွဲထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၅။ ကျွနု်ပ်၏ ဖန်တီးမှုလက်ရာများအတွက် မူပိုင်ခွင့် ရှိပါသလားခင်ဗျာ။
ရှိပါတယ်။ သင့်ဖန်တီးမှုလက်ရာများအတွက် သင့်မှာ မူပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိပါတယ်။
သင်၏လက်ရာများကို သင်၏ လွတ်လပ်သော၊ ပြည့်စုံသော၊ သတ်မှတ်ထားသောနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိသော မူပိုင်ခွင့်များ ပိုင်ဆိုင်ထားရန် သေချာအောင် လုပ်ထားရပါမည်။ သင်၏ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော လက်ရာများနှင့် ရေးသားချက်များသည် မူပိုင်ခွင့်၊ ပုံတူဓာတ်ပုံ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအခွင့်အရေးအပါအဝင် မည်သည့်တတိယပါတီ၏ မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆို မချိုးဖောက်ရန် သေချာစေရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးသည် ဤအပိုဒ်နှင့်သဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ယောက်သည် အထက်ဖော်ပြပါ အာမခံချက်အား ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပါက သူ(သို့မဟုတ်)သူမသည် ပွဲစီစဉ်သူများနှင့် မသက်ဆိုင်သော တာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ တစ်ချိန်က Awards တွင်ပါဝင်သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များကို တင်သွင်းသူမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအား တင်သွင်းသည့်နေ့မှစ၍ ဆက်သွယ်ရေး၊ ပစ္စည်းများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းမီဒီယာများသို့ အခမဲ့လျှောက်ထားရန် ခွင့်ပြုသဘောတူရမည် ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ပုံပြပွဲ၊ လက်လီဆိုင်များ၊ လမ်းပြပွဲများ၊ ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများ၊ ထိုအကြောင်းပြချက်အတွက် ကမကထပြုသူသည့် သူ / သူမ၏လက်ရာများကို အသုံးပြုရန်အတွက် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ သဘောတူညီမှုကို သီးခြားအကြောင်းကြားမည် မဟုတ်ပါ။
သင်၏လက်ရာများကို သင်၏ လွတ်လပ်သော၊ ပြည့်စုံသော၊ သတ်မှတ်ထားသောနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော မူပိုင်ခွင့်များကို သင်ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ သင်၏ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနဲ့ ရေးသားချက်များသည် မူပိုင်ခွင့်၊ ပုံတူဓာတ်ပုံ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် သီးသန့်တည်ရှိမှုအခွင့်အရေးအပါအဝင် မည်သည့်တတိယပါတီ၏ မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆို မချိုးဖောက်ရန် သေချာစေရမည်။ သင်၏ပြိုင်ပွဲတွင် သင်၏ပါဝင်မှုသည် စည်းကမ်းချက်များနှင့်သဘောတူထားသည်ဟု မှတ်ယူရပါမည်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အာမခံချက်တစ်ခုခုအား ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပါက သူ သို့မဟုတ် သူမသည် စီစဉ်သူများနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်သော တာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးကို ထမ်းဆောင်ရမည်။
၁၆။ ဆုတစ်ခုခုကို အနိုင်ရခဲ့ပါက ဘယ်လိုအသိပေးအကြောင်းကြားပေးမှာပါလဲ။
အနိုင်ရရှိသူများကို အများအားဖြင့် ဖုန်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ ဤအတောအတွင်း, စီစဉ်သူများသည် သင်၏စစ်ဆေးမှု အဆင်ပြေစေရန်အတွက် vivo VISION + မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံဆုပေးပွဲ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဆုရသူများစာရင်းကို ကြေငြာလိမ့်မည်။ ထိုစာရင်းကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပေကျင်းအချိန် (UTC + 8) တွင် ထုတ်ပြန်မည်။ အသေးစိတ်အတွက် vivo VISION + Mobile Photography Awards ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ရောက်ပါ။
၁၇။ ကျွန်ုပ် ပေးပို့ တင်သွင်းထားသော ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို ကျွန်ုပ် ဖျက်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ vivo VISION + Mobile Photography Awards ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် "Gallery" ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ စကာတင်စာရင်းတင်သွင်းခံရခြင်းမရှိသောဆုများကိုရရှိရန် သို့မဟုတ် မည်သည့်ဆုကိုမဆိုရရှိရန် သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်) ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်တရားမျှတမှုရှိစေရန်အတွက် သင့်လက်ရာများကို ဆုစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေပြီး အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနေစဉ်_ ဆိုလိုသည်မှာ တင်သွင်းခြင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ပြီး(“ ပဏာမအကဲဖြတ်စိစစ်ရေးအဆင့်” စတင်)ပြီး တင်သွင်းခြင်းပြီးဆုံးပြီးဆိုပါက ထိုကဲ့သို့ မလုပ်စေလိုပါ။ သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို ဖယ်ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါက (အကယ်၍ ဆုများကို သင်၏အရည်အချင်းများကို ပယ်ဖျက်သည့်အနေဖြင့် မှတ်ယူလိမ့်မည်ဆိုပါက) visionplus@vivo.com ၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။
၁၈။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရာများကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ပြသပါမည်လား။
"Vivo VISION + Mobile Photography Awards သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဆန်သောမိုဘိုင်းဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဗဟိုပြုစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေးအောင်မြင်ပြီးပါက VISION + Mobile Photography Awards ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများအကြား ပြသထားမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို http://visionplus.vivo.com/ (သို့မဟုတ်) အခြားအကျိုးတူပူးပေါင်းထားသည့် channel များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
င့်ပြသလိမ့်မည် မိတ်ဖက်လမ်းကြောင်းများ။ သင်၏လက်ရာများ ပြသသော အခြေအနေကို ပြောင်းလဲရန်“Gallery” သို့လည်း သင် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။"
သင်၏ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို vivo Vision + Mobile Photography Awards ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အပြင် ပြိုင်ပွဲ၏မိတ်ဆက် channel များမှတစ်ဆင့် ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။